Aịzaya 64 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
64 A sị nnọọ na ị dọwara eluigwe, a sị na ị gbadatara,+ a sị na ugwu niile mara jijiji n’ihi gị,+ 2 dị ka mgbe ọkụ na-ere irighiri nkụ, ọkụ ahụ emeekwa ka mmiri na-agbọ, iji mee ka ndị iro gị mara aha gị,+ ka mba niile wee maa jijiji n’ihi gị!+ 3 Mgbe i mere ihe ndị dị egwu+ anyị na-atụghị anya ha, ị gbadatara. Ugwu niile mara jijiji n’ihi gị.+ 4 Malite n’oge dị anya gara aga, ọ dịghị onye nụrụ,+ ọ dịghị onye gere ntị, ọ dịghịkwa anya hụworo Chineke ọzọ ma e wezụga gị,+ gị onye na-emere onye na-atụ anya gị ihe.+ 5 Ị bịakwutewo onye na-enwe aṅụrị, nke na-emekwa ezi omume,+ ndị na-echeta gị site n’iso ụzọ gị.+ Lee! Iwe were gị,+ mgbe anyị nọ na-emehie+—nọrọ n’ime ya ruo ogologo oge. È kwesịrị ịzọpụta anyị?+ 6 Anyị wee yie onye na-adịghị ọcha, anyị niile, ezi omume anyị niile yikwara uwe e yi mgbe a na-ahụ nsọ;+ anyị ga-akpọnwụ dị ka mkpá akwụkwọ,+ anyị niile, njehie anyị ga-ebufukwa anyị dị ka ifufe.+ 7 Ọ dịghị onye na-akpọku aha gị,+ ọ dịghị onye obi ya na-akpali ijide gị aka; n’ihi na i wepụwo ihu gị n’ebe anyị nọ,+ i mekwara ka ike nke njehie anyị gbazee anyị.+ 8 Jehova, ị bụ Nna anyị.+ Anyị bụ ụrọ,+ ọ bụ gị kpụrụ anyị;+ anyị niile bụkwa ọrụ aka gị.+ 9 Jehova, ewebigala iwe ókè,+ echetala njehie anyị ruo mgbe ebighị ebi.+ Biko, leenụ: anyị niile bụ ndị gị.+ 10 Obodo nsọ gị niile+ aghọọla ala ịkpa. Zayọn+ aghọọla naanị ala ịkpa, Jeruselem aghọọkwa ebe tọgbọrọ n’efu.+ 11 Ụlọ nsọ anyị nke mara mma,+ bụ́ ebe nna nna anyị hà nọ too gị,+ aghọọla ihe a gbara ọkụ;+ a lawo ihe niile anyị na-achọsi ike n’iyi.+ 12 Jehova, ị̀ ga-ejide onwe gị mgbe ihe ndị a na-eme?+ Ị̀ ga-agba nkịtị kwe ka e mekpaa anyị ahụ́ gabiga ókè?+